सत्ताका लागि 'नायक’- विचार - कान्तिपुर समाचार
श्रावण २३, २०७६ चन्द्रकिशोर
भारतमा स्वतन्त्रतापछि महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरूले नायकका रूपमा गरिमा पाए । एक ‘बापु’ र अर्का ‘चाचा’ भनेर चिनिए । गान्धीले भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई फराकिलो गरी भुइँ सतहसम्म पुर्‍याए । विशाल भारतको विविधतायुक्त बनोट भएका बासिन्दालाई एक ठाउँमा उभ्याए । आम मानिसमा रहेको भयलाई हटाए र शान्तिपूर्ण सङ्घर्षका निम्ति गोलबन्द पारे ।
नेहरूले लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रारम्भिक वर्षहरूमा मार्गदर्शक र मेन्टरको काम गरे । सन् १९६० को दशकसम्म अखिल भारतीय राष्ट्रिय चेतनामा गान्धी र नेहरूको अत्यधिक प्रभाव रह्यो । एकलौटी भने पनि हुन्छ । त्यही दशकमा अमेरिकी विद्वान एलेनाँर जेलियटले अम्बेडकर र महाराष्ट्रको ‘महार आन्दोलन’ बारेमा एउटा राम्रो शोध प्रबन्ध लेखे, तर उनले प्रकाशक भेटाउन सकेनन् ।
कालान्तरमा कांग्रेसले विभिन्न प्रान्तहरूबाट सत्ता गुमाउँदै गयो । सन् १९७७ पछि त केन्द्रीय सत्ताबाट समेत फ्याँकिने क्रम सुरु भयो । नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयसँगै नयाँ–नयाँ नामहरू प्रस्तुत गर्न थालिए । इतिहासको पुनर्मूल्यांकनबाट सबभन्दा बढी लाभ अम्बेडकरले पाए । अब अम्बेडकरमाथि किताब लेख्ने कुनै व्यक्तिलाई प्रकाशकको कमी छैन ।
नेपाली सन्दर्भमा यस्तै किनारा पारिएका अनेकौं पात्रहरू छन् । गणेशमान सिंह वा महेन्द्रनारायण निधिलाई सम्झिन तिनका भौतिक उत्तराधिकारी नै अगाडि सर्नुपर्छ । शासकीय संरक्षण पाउन नेपाली कांग्रेसका बीपी कोइरालाजस्तै एकथरी वामपन्थी खेमामा मदन भण्डारी अग्रपंक्तिमा रहे । निश्चित रूपमा यी दुई नाम बहुस्वीकार्य रहे, तर यिनीहरूकै अगुवाइमा भएका सङ्घर्षहरूमा जिल्ला, क्षेत्र र राष्ट्रिय तहमा खटिएका अनेकौं पात्रहरू उसै छुटे । तिनलाई दलीय शक्ति सन्तुलनको खेलमा लात मारे जस्तै भयो । मधेसको राजनीति गर्नेहरूका लागि गजेन्द्रनारायण सिंह, रामजनम तिवारी वा बलदेव राम नयाँ पिढीका लागि मुख्य प्रेरणाका स्रोत हुन् । तर मधेसबाट राजनीतिक साधना गर्नेहरू यी नाम लिन पन्छिन थालेका छन् ।
अहिले केही ठाउँ विशेषमा बीपी र पुष्पलाललाई सँंगसंँगै सम्झिने क्रम सुरु भएको छ । तिनको योगदानलाई अहिलेका चुनौतीहरूसंँग जोडेर हेर्ने र साझा पुनर्मूल्यांकन गर्ने जमर्को देखिएको छ । जुनसुकै कोणबाट भएका यस्ता प्रयत्नहरूको तारिफ गर्नुपर्छ । देवत्वकरण भने कसैको गरिनु हुँदैन ।
आफ्नो समयको सीमा र सम्भावनाबाट कोही पनि मुक्त हुँदैन । भू–राजनीतिले थिचिएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा पात्रहरूको उदय र पतन साँप–सिँढीको खेलजस्तै हुने गर्छ । को कति समय सत्तामा बसे वा सत्तालाई दबाब दिए भन्दा पनि समग्रतामा तिनको प्रतिबद्धतालाई हेर्नुपर्छ । भोलि महेन्द्रनारायण निधि वा भीमबहादुर तामाङबारे वामखेमाले र मनमोहन अधिकारी वा मातृकाप्रसाद कोइरालाकै बारे कांग्रेसले चरितमन्थन गरे हुन्छ ।
कुनै मुलुकको निर्माण र उन्नतिमा त्यसका नायकहरूको अहम् भूमिका हुने गर्छ । केही नायक समय, विचारधारा र आन्दोलनभन्दा माथि पुग्छन् । केहीको छवि कुनै आन्दोलन विशेष, शासकीय मनसुबा वा तत्कालीन सामाजिक–आर्थिक परिस्थितिले कोर्छ । नेपाली समाज अहिले यिनै द्वन्द्वहरूबाट गुज्रिरहेको छ । कोहीले आफैं नायक बन्न प्रशस्ति गानमा अनेकौं गिरोह निर्माण गरेका छन्, कोहीले आफू बलियो हुन इतिहासको बन्द किताबबाट झिकेर कुनै पात्रलाई शिरोधार्य गरेका छन् । इतिहासका नायकहरूलाई आफ्नो कित्तामा कब्जा गर्न लुछाचुँडी पनि हुँदै छ ।
विभिन्न क्षेत्र, समुदाय र जात विशेषको जागरुकतालेआफ्नोमाझ आफ्नै नायक प्राप्तिको चाहना छ । दल विशेष वा दलकै गुट विशेषले आ–आफ्नो कित्ताको नायक पुज्ने गरेका छन् । यही खिचातानीले होला, नायकहरूमाथि कतिपय कोणबाट प्रतिशोध साध्ने काम पनि भइरहेको छ । नायक त्यो पात्र हो, जसले बृहत रूपमा आफ्नो काम, विचार, सिर्जना वा उत्सर्गले समयलाई प्रभावित पार्‍यो । र प्रभावित हुनेहरूले उसको गोरेटोलाई पछ्याउने प्रतिबद्धता राख्छन् ।
राष्ट्रिय जीवनका प्र्र्रत्येक क्षेत्रमा यस्ता नायकछन् । तर राजनीतिमा लागेकाहरूको श्रेष्ठता बढी देखाइने गरिन्छ । कैयौं बेला राजनीतिक लाभहानिको लेखाजोखागरी अन्य क्षेत्रका पात्रलाई पनि अगाडि सारिन्छ । देश र जनतालाई बलियो बनाउने कार्यलाई राजनीतिले अगुवाइ गरे पनि अन्य क्षेत्रको भूमिका कम हुँदैन ।
सेनाको संरचनाबारे एउटा भनाइ चर्चित छ, ‘अफिसर दुई किसिमका हुन्छन् । एउटा लोयल लेफ्टिनेट्स र गुड केप्टेन्स’ । सामान्य अर्थमा यसको अनुवाद गरेर अर्थ्याउँदा ‘बफादार’ र ‘काबिल’ भन्न सकिन्छ । तानाशाहीका लागि लोयललेफ्टिनेन्ट र युद्ध जित्नका लागि गुड क्याप्टेन आवश्यक पर्छन् । अहिलेको दलीय राजनीतिमा पनि दलभित्र आलोचनात्मक चेतभन्दा शीर्ष र तृण तहबीच निर्माण भएको स्वार्थहरूको माकुरा जालोबाट ‘नायक’ निर्माण हुन पुग्छ ।
जबकि यस्ता नायक तिनकै राजनीतिक समूहभित्र स्वीकार्य हुँदैनन् । नायक बन्ने आकांक्षा र स्वार्थ अभिप्रेरित बनाइएको नायकत्वको प्रतिमा कतिपय अवस्थामा समयको धुलोमा ढाकिन पुग्छ । कोही यस्ता पनि पात्र हुन्छन्, जसलाई अतीतको अँध्यारो गुफाबाट प्रतिबद्ध अभियन्ताले खोजेर ल्याउँछन् र वर्तमानलाई चिनाउँछन् ।
शासकीय सत्ता वा राजनीतिक सत्ता जसको हातमा रहन्छ, तिनले आफूले रोजेका पात्रको कदभन्दा अग्लो छवि खडा गरिदिन्छन् । सत्ताले आमजनमा लोकप्रिय धारणा निर्माण गर्न सहयोगी पक्षको भूमिका खेल्छ । कतिपय अवस्थामा जनआन्दोलनले सत्ताद्वारा निर्मित नायक छवि भएका पात्रहरूको मानसमूर्तिलाई भञ्जन गरिदिन्छ ।
नेपाली इतिहास नायकहरूको खोजी, रोजाइ र भञ्जनको प्रयोगशाला रहँदै आएको छ । यो प्रवृत्तिमा पूर्णविराम लाग्ने छैन । जागृत चेतनाले जसरी अतीतको उत्खनन गरिरहेको छ, त्यसैगरी पात्रहरूप्रतिको हेराइमा बदलाव आउँदै छ । राजनीतिक दल र सामाजिक आन्दोलनले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । देशको अतीतलाई वर्तमानमा कसरी रेखांकित गर्ने ?
संगठित शक्ति वा आन्दोलनले अतीतलाई जसरी पस्किने गर्छ, त्यसबाट पनि पात्र परिचयको नवभावभंगिमा खडा हुन्छ । यदाकदा कैयौं महत्त्वपूर्ण पात्रहरू समय सन्दर्भमा ओझेल पर्दै जान्छन् । कतिपय कम योगदान गरेकाहरू भने कुनै अभीष्टको भर्‍याङमार्फत ठूलो कदका बनाइन्छन् । कोही संकीर्ण स्वार्थको आँखीझ्यालबाट चियाएर ऐतिहासिक पात्रलाई हेर्छन् र मनचाहा व्याख्या गर्छन् । शक्तिको खेलमा अहिले यो शतरञ्ज खुब चलेको छ ।
मूलभूत रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुकलाई जोड्ने सूत्रहरू यस्ता पात्र विशेष हुन्, जसले नेपालको सशक्तिकरणका लागि आजीवन भूमिका खेले । स–सानो कचौरामा पात्र विशेषको तस्बीर राखी राजनीतिक शक्ति खोजी गर्ने मगन्ते शैलीले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । तर सत्ता राजनीतिले अहिले यस्तै प्रवृत्तिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०८:०४
श्रावण २३, २०७६ एएफपी
लन्डन — इंग्लिस प्रिमियर लिगको नयाँ सिजन शुक्रबार सुरु हुँदै छ । सुरुआती केही साताका प्रमुख ५ खेल यस्तो हुनसक्छ :
वेस्ट ह्यामविरुद्धम्यानचेस्टर सिटी, अगस्ट १०
पछिल्लो सिजन म्यानचेस्टर सिटीले लिग उपाधि जित्न अन्तिम दिनसम्म कुर्नुपरेको थियो । यसक्रममा टोलीले लिभरपुलको चर्को चुनौती सामना गर्नुपर्‍यो । अन्तिम दिन सिटी १ अंकको अग्रताले मात्र लिग उपाधि जित्न सफल रह्यो । त्यो पनि लगातार दोस्रो सिजन । लिभरपुलसँगै अरू टिमको बलियो चुनौती पाखा लगाउन सिटीको प्रदर्शन त्यस्तै अब्बल दर्जाका हुनुपर्नेछ । यसको पहिलो सर्त हुनेछ ठोस सुरुआत । यस्तोमा सिटीको पहिलो खेल हुनेछ वेस्ट ह्यामविरुद्ध । सिटीले पछिल्ला चार खेलका लागि वेस्ट ह्यामको भ्रमण गर्दा सबैमा जित निकालेको छ । त्यसमाथि १७ गोल पनि गरेको छ ।
म्यानचेस्टर युनाइटेडका डानियल जेम्स । २१ वर्षे जेम्स युनाइटेडका नयाँ अनुबन्धित खेलाडी हुन् । स्वान्सी सिटीबाट व्यावसायिक डेब्यू गरेका उनी वेल्सका हुन् ।
म्यानचेस्टर युनाइटेडविरुद्ध चेल्सी, अगस्ट १०
फ्रान्क लाम्पार्ड खेलाडी छँदा चेल्सीका ‘लेजेन्ड’ थिए । अहिले उनी प्रशिक्षक भएका छन् । चेल्सीले आफ्नो पहिलो खेलका लागि म्यानचेस्टरको घरमा खेल्दा सबैको आँखा यिनै लाम्पार्डतर्फ केन्द्रित हुनेछ । म्यानचेस्टरको जिम्मेवारी यस्तै युवा प्रशिक्षकको हातमा छ, ओले गनर सोल्सायरका रूपमा । उनी पनि लिगमा राम्रो सुरुआत चाहन्छन् । गत सिजनको प्रदर्शन म्यानचेस्टरका लागि सुखद रहेन । यसपल्ट म्यानचेस्टरको पहिलो लक्ष्य हुनेछ, युरोपेली च्याम्पियन्स लिगमा छनोट हुने । यो काम गर्न सकेन भने निश्चित रूपमा यी नर्वेली प्रशिक्षकको जागिर पनि दाउमा पर्न सक्छ ।
चेल्सीका युवा स्टार क्रिस्टियन पुलिसिक । बोरुसिया डर्टमन्डबाट व्यावसायिक करिअर सुरु गरेका २० वर्षे पुलिसिक जनवरीमा चेल्सी आएका हुन् । उनी कीर्तिमानी रकममा अनुबन्धित हुने अमेरिकी खेलाडी हुन् ।
म्यानचेस्टर सिटीविरुद्धटोटेनहम, अगस्ट १७
यी दुवै टिमका समर्थक नभएकाहरू चाहन्छन्, म्यानचेस्टर सिटी र टोटेनहम भिड्दा त्यो खेलले युरोपेली च्याम्पियन्स लिग क्वाटरफाइनलको झल्को देओस् । इतिहाद मैदानमा भएको त्यस खेलमा टोटेनहम ४–३ ले पराजित रह्यो, तर घरबाहिरको गोल मदतले टोली सेमिफाइनल पुग्न सफल पनि रह्यो । त्यसको बदला लिँदै सिटीले लगत्तै भएको लिग खेल भने १–० जित्यो । यही जितले त हो लिगमा सिटीको पकड अझ बलियो भएको ।
लिभरपुलविरुद्धआर्सनल, अगस्ट २४
सन् १९९० यता लिग जित्न नसकेर निराश रहँदै आएको लिभरपुलले गत सिजन विजेता बनेको म्यानचेस्टर सिटीलाई निकै नजिकबाट चुनौती दियो । योर्गन क्लोपले आफ्नो पहिलो ठूलो खेलमा आर्सनलका सामना गर्दा देखिनेछ, यसपल्ट यही लिभरपुलको खेल कस्तो हुनेछ भनेर । डिसेम्बरमा रोबर्टो फिर्मिनोको दुई गोल मदतले लिभरपुलले आर्सनललाई ५–१ ले हराएको थियो । उनाइ इम्रेको नेतृत्वमा आर्सनल अझै पुनर्निर्माणको क्रममा छ । विश्वास गर्न सकिन्छ लिभरपुलले फेरि एकपल्ट आफ्नो लन्डन क्लबविरुद्ध राम्रो खेल्नेछ ।
आर्सनलका डानियल सेवलोस । २३ वर्षे स्पेनिस मिडफिल्डर सेवलोस यसै सिजन लोनमा रियल म्याड्रिडबाट आएका हुन् ।
आर्सनलविरुद्धटोटेनहम, सेप्टेम्बर १
यसपल्ट पहिलो उत्तरी लन्डन डर्बीको साइत चाँडै जुरेको छ । आर्सनलले यो खेलको आतिथ्यता गर्नेछ । यस खेलमा आर्सनलले त्यो खेल कसरी खेल्नेछ, त्यसले पूरा लिगमा उसले तय गर्ने बाटो पनि निर्धारण गर्नेछ । गत सिजन टोटेनहमविरुद्धका दुई खेलमा आर्सनलले ४ अंक बटुलेको थियो । तर समग्रमा भने आर्सनल एक अंकको दूरीले पाँचौं स्थानमा रह्यो । यसक्रममा आर्सनल लगातार चौथोपल्ट टोटेनहमभन्दा अंक तालिकामा पछाडि परेको थियो ।
कम्युनिटी सिल्डमा लिभरपुलका रोबर्टो फिर्मिनो र म्याचेस्टर सिटीका अलेकजेन्डर जिनचेन्को एयर बलमा जुध्दै । दुवै आ–आफ्नो टोलीका भरपर्दा खेलाडी हुन् । युक्रेनका जिनचेन्को २०१६ जुलाईदेखि सिटीमा छन् भने ब्राजिली स्टार फिर्मिनोले भने २०१५ को जुलाईयता लिभरपुलबाट खेलिरहेका छन् ।
प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०७:५७
डा. अंगराज तिमिल्सिना